Nzira dzeku Ongorora Yako SEO Performance Na Semalt
CHII CHINONZI SEO KUPENYESA ANALYSIS?
ZVINOKOSHA ZVESE ZVOKOSHA
KUPARIDZA IZU PENYANYA NEMEMEMED
Mazuva ese varidzi vewebsite varidzi, webmasters, vanoongorora, uye mamaneti ekushambadzira edigital anofambisa mafungiro kuti awedzere kutungamira kweavo kana webhusaiti mawebhusaiti muGoogle yekutsvaga.
Zvese zvavanoita zvinotenderera pane imwechete nguva, SEO . Kuziva uye kushandisa SEO zvinodiwa kunovabatsira kugadzirisa chinzvimbo chewebsite muSERPs (Tsvaga Injini Yekutsvaga Mapeji).
Pane zvishandiso zviripo zvekuongorora iyo SEO kuita kwewebhu webhusaiti, asi kutsvaga iyo chaiyo haisi chinhu chakadarika kukunda kuhwina hafu yehondo yekumusoro.
Ichi chinyorwa chinokupa iwe kunzwisiswa kweSEO performance ongororo uye kuti yakavimbika sei sosi, Semalt, inogona kukubatsira iwe kuzadzisa yako SEO zvinangwa.
Kana iwe usingakwanise kumirira kuti ubatsirwe kubva kune webhusaiti analytics chitauri cheSemalt, tinya apa uye unakirwe. Iwe unogona zvakare kupfuurira kuverenga chinyorwa uye kudzidza nezvenzira dzekuongorora SEO kuita neSemalt.
Chii chinonzi SEO Performance Analysis?
SEO maitiro ekuongorora ndeyekunyatso ongorora kwe saiti pane akasiyana SEO-ane hukama parameter. Izvo zvinosanganisira kuongorora webhusaiti uye kuratidza izvo optimization zvinodiwa zveiyo yepamusoro nzvimbo muSERPs.
SEO mashandiro ekuita anokubatsira iwe kuti uone kana SEO yako iri munzira uye ndeipi nyaya, inokanganisa chimiro chenzvimbo yako, iwe unofanirwa kugadzirisa.
Kukosha kweSEO Performance Ongororo
Pfungwa dzakapihwa ne SEO maitiro ekuongorora anozopedzisira abatsira iwe zvinotevera:
Kubatsira pakuwedzera kwako kusvika.
Inotyaira yakawanda traffic kune webhusaiti yako.
Iyo inobatsira yako webhusaiti padanho kumusoro mukutsvaga kwekutsvaga.
Inokuita kuti uwane zvinangwa zvako zvehunyanzvi nekukurumidza.
Nekuongorora uku, iwe unoita zvakanaka-kufunga uye zvine hungwaru sarudzo. Iyo nguva nemari inodikanwa pakuvandudza resaiti yako zvakare inoderera zvakanyanya.
Iko kusipo kwekunyatsoongororwa kwe SEO maitiro ekuongorora, kuita zvisarudzo zvine ruzivo rwekuvandudza mamiriro esaiti muGoogle yekutsvaga mhinduro hazvingaite.
Essentials eSEU Performance
Izvo zvazvino kuvandudza kuGoogle's algorithms zvinotarisa pane iwo webhusaiti nzvimbo dzinoratidza kukosha kuburikidza nezvirimo, uye kwete kungoshandisa hunyanzvi hwehunyanzvi kukwirira kumusoro.
Kune dzakawanda SEO nheyo dzinobatsira pakuongorora uye kugadzirisa webhusaiti. Mimwe yakakosha ndeiyi:
Zvemukati Kuburitsa Frequency
Ngatinzwisise chimwe nechimwe chazvo.
Wese webhusaiti inofanirwa kupa ruzivo rwehunyanzvi kune vashambadzi vewebhu kuitira kuti vanzwisise, vaone, uye vanyore pasi mumitsva yekutsvaga. Aya matekinoroji anoshanda kana kungoisa, zvichienderana nebasa remuridzi webhusaiti.
Active technicalities inosanganisira yekutanga yakatorwa yekuzivisa injini dzekutsvaga nezve shanduko kune saiti. Muenzaniso wenzira iyi ndeyekubatanidza webhusaiti yako kune webmaster zvishandiso zveinjini dzekutsvaga zvekutarisa maitiro ayo e SEO.
Passive technicalities inosanganisira yekutanga kutora yakapihwa yekupa injini dzekutsvaga ruzivo runodiwa kuti indexing mapeji esaiti. Muenzaniso wekupinda chete ndewekupa iyo XML faira yekutsvaga injini kuitira kuti vanzwisise zviri nani izvo zvemukati zvinoda indexing.
Kana yako webhusaiti isina SEO, kuedza kwese kwaunoisa mukugadzira uye kuburitsa zvinonakidza zvemukati marara sezvo injini dzekutsvaga dzichikundikana kuratidza yako saiti.
Mazwi akakosha mazwi kana mitsara vanhu vanoshandisa kutsvaga zvigadzirwa, masevhisi, kana ruzivo kuburikidza neinjini dzekutsvaga. Vaparidzi vezvinoitika uye varidzi vewebsite vanozivisa makiyi anonyanya kushandiswa kutsvaga zvigadzirwa kana masevhisi, uye nekudaro, kugadzira zvakakodzera zvemukati.
Paunowana iwo mazwi akakosha anonyanya kukosha kune chako zvipiriso, zvinova nyore kugadzira zvemukati uchishandisa iwo. Semhedzisiro, webhusaiti yako inokwezva yakawanda uye yakawanda traffic.
Ziva kuti haufanire kushandisa zvakanyanya, kushandisa zvisirizvo, kana kushandisa zvisina kukodzera mazwi nekuti izvi pazvinoitika, injini dzekutsvaga hadzi kutambisa nguva yakawanda pakuranga webhusaiti.
Mawebhusaiti anotaurirana kuburikidza nemapeji ewebhu, uye aya mawebhusaiti anofanirwa kutarisa nezve-kunyora zvinyorwa (tevedzera mamwe marongero nemirairo zvine chekuita nezvirimo) kuwedzera basa rekutsvaga webhusaiti.
Zvemukati-kukodha zvinosanganisira chaiyo chimiro chewebhu peji. Iyo inofanirwa kutsanangura kurongeka kwezvinhu zviri pane peji rewebhu kutsvaga injini. Ive nechokwadi chekuti peji rewebhu rezita, misoro yaro nemusoro wenyaya (H1, H2, H3, H4), tsanangudzo yayo, uye zvimwe zvinhu zvakarongedzwa kuti zvive nyore kuzivikanwa neinjini dzekutsvaga.
Iwe unofanirwawo kushandisa akakosha mazwi uye chengeta iwo density kurudyi pane peji rako rewebhu. Chengetedza keyword density mirayiridzo yemavhidhiyo nemifananidzo zvakare.
Nhasi, backlinks yakakosha nekuti inokurudzira mamiriro ewebhu peji pane injini dzekutsvaga. Backlinks ingori mawebhusaiti anobatanidza kumashure kune peji rewebhu.
Kunzwisisa mutambo we backlinks kune hunyengeri. Pane zvinhu zviviri zvinoda kunzwisiswa nemunhu:
Nzvimbo dzese dzakanangidzirwa paGoogle dzinopihwa PejiRank kunoenderana nehuwandu hwemasiti anobatanidza kumashure kwavo.
Backlinks inouya kubva kune imwechete webhusaiti ine yakakwirira PageRank ine huremu hwakawanda uchienzaniswa nemashure backlinks kubva mazana emasaiti ane akaderera PageRank.
Kana peji rako rewebhu rikawana backlinks kubva kune webhusaiti ine yakakwira PageRank, injini dzekutsvaga dzinotanga kufunga nezvepepa rako rewebhu rakakosha zviwanikwa, uye nokudaro, chinongedzera kumusoro.
Social Media mapuratifomu anoshanda kwazvo kana zvasvika pakugovana zvemukati. Kugovera chinyorwa kana faira rezvenhau pamapuraneti ezve media senge Facebook, Twitter, LinkedIn, uye vamwe zvinoreva kugadzira yakakwirira PageRank backlinks kune webhusaiti.
Sezvo zvinenge zvese zvirimo zvichigovaniswa pasocial media nemunhu wese, vamwe vanhu vanofunga zvakanyanya kugovera kunatsiridza dhesi yewebhusaiti. Zvakanaka, haisi zana muzana chokwadi.
Kune enjini dzekutsvaga, chidimbu chemukati chakakosha kana chichiwana mamwe mapato pamwe nekudyidzana kwepamusoro. Inosanganisira nhamba yekuda, makomendi, uye kudzokorora maTets kana kugoverazve.
Kana izvi zvikaitika newebhusaiti yako, injini dzekutsvaga dzinozoona kuti zvirimo pane zvakakosha uye zvaunganidza kuonga kuburikidza nezviito. Nekudaro, ivo vanozozvikwidziridza zvakakwirira zvakasikwa.
Injini dzekutsvaga, seGoogle, nzvimbo dzemawebhusaiti kwete chete nekuda kwekuita zvemagetsi, mazwi akakosha, zvemukati, uye kugovana midhiya enhau asi zvakare nekuda kwechiitiko chaicho chevashandisi vane peji rewebhu.
Zvakaitika pamushandisi zvinosanganisira dhizaini yewebsite uye kuiswa kwezvinhu zvirimo. Kuwedzera kune zvimwe zvakakosha, Google inofungawo kuiswa kwekufona kune zviito zvewebhu pane peji rewebhu.
Google inokoshesa kana zvinhu zvakaita sekushambadzira kana bhatani bhatani kana bhatani bhatani zvinowanikwa pasina kupuruzira peji pasi. Ehe, zvinobatsira iyo rehu saiti webhusaiti.
Izvo hazvirevi kushandisa zvisizvo chikamu ichi (pamusoro pechidziro). Semuenzaniso, Google inoranga kana ichinge yaona kuti webhusaiti yako ine zvakawanda kushambadzira pamusoro pesero.
Webhusaiti inofanirwa kunge iine zvinyorwa zvinongedzerwa uye kuiswa mumjini yekutsvaga. Kana paine mamwe mapeji emukati emawebhusaiti, injini dzekutsvaga dzive nezvimwe zvinongedzo zvetauro.
Icho chikonzero chekuzivikanwa uye kubudirira kwenzvimbo dzenhau. Ivo vanogara vachizivisa zvakawanda zvemukati izvo, zvinowedzera, kwete chete huwandu hwemapeji ane indexed asiwo traffic.
Kune mamwezve mablogiki akakosha anogarotumira zvinyorwa zvine iwo mazwi akakosha uye misoro. Urongwa uhwu hunotaurira Google kuti aya mablogiki akakosha ane ruzivo. Saka, inovasimudza kumusoro.
Izvi zvese zvinoreva kuti zvirimo zvinoburitsa frequency chinhu chakakosha chinzvimbo. Kana iwe uchigara uchitumira nyowani, yakagadziridzwa, uye yakakodzera zvemukati pane yako webhusaiti, injini dzekutsvaga dzinozoona uye nekuvandudza mamiriro ayo.
Kuongorora SEO Performance naSemalt
Kuchengeta zvese zvakakosha zveSEO hazvisi nyore kumunhu. Ndokusaka kune makambani ekushambadzira edigital, saSemalt, ane nyanzvi dzekubata dzakasiyana SEO zvinhu.
Mumakambani akaita seSemalt , dzimwe nyanzvi dzinobata zvemukati curation, vamwe vanobata hunyanzvi, vamwe vanotarisisa nezve backlinks, uye inoenderera seizvi. Kuedza pamwe chete kwenyanzvi idzi kunoguma nekuvandudza SEO kuita kwewebsite.
Semalt inopa inotevera-chikamu chewebhu analytics sevhisi iyo:
Inotarisisa musika iwe
Inotevedzera yako pamwe neako mukwikwidzi's rankings
Inowana ruzivo rwakakwana nezvebhizinesi rako
Semalt inobatsira nemaKPIs ese (Key Performance Indicators) kubudirira kweSEO. Mamwe acho nde:
Kunzwisisa kwewebhu webhusaiti
Organic yekutsvaga traffic
Zvemagariro ezvekudyidzana kubatanidzwa
Sei Webhusaiti Webhusaiti Inoshanda?
Kutanga, iwe unofanirwa kunyoresa naSemalt uye kutanga maitiro ekuwana data yekuongorora. Kana maitiro acho apera, iwe unowana rakazara nhoroondo rine:
chinzvimbo chewebsite yako
rondedzero yevanokwikwidza vako
kuongororwa kwewebsite yako zvine chekuita neindasitiri zviyero zvewebsite dhizaini uye SEO
Iwe unogona zvakare kushandura iyi yakazara nhoroondo ku CSV pamwe nePDF mafomu uye kurodha pasi pakombuta yako. Semalt inobvumirawo kutumira iyi email analytics mushumo.
Kutanga nekuongorora kwewebsite zviri nyore uye zvakasununguka. Iwe unongofanirwa kuisa saiti yekutonga, uye mukati meminiti kana maviri, iwe uchadzidza nezvezvinhu zvinodzivirira webhusaiti yako kubva padanho repamusoro mukutsvaga kwekutsvaga.
Kuti uwedzere saiti yako ku'PR kuongororwa 'kwemahara, unogona kudzvanya apa uye wobva wakanda pasi. Paunoriwana, ingoisa zita rewebhusaiti yako uye tinya pane bhatani 'Kutanga Izvozvi'.
Kuongorora SEO kushanda kwakakosha pakuvandudza mamiriro ewebhusaiti pane injini dzekutsvaga. Iyo inokubatsira iwe kuona izvo zvine chekuita nekudzikisira webhusaiti yako.
Kuongorora ndiyo yekutanga nhanho yekuvandudza iyo SEO yekuita saiti. Inokuzivisa iwe nezvezvinhu zvinoda kuvandudzwa, saka shanda pane izvo.
Nekudaro, nzira yakanakisa ndeyekuhaya masevhisi eadhijitari yekushambadzira agency, seSemalt. NaSemalt, iwe unogona kuzorora pamubhedha wako uye tarisa yako webhusaiti ichiva inoshamisa mukurumbira.